Gaarsiinta Qaab dhismeedka wadnaha ee soobaxyada (51 roodh) ee magaalada Moscow - u dalbo ubaxyo
Wadnaha qaabdhiska soobaxyada (51 ubax)
Wareeg 45 cm
Dhererka 10 cm
Bouquet of-a, madax weyn ubax cadcad Ecuador premium (11 kumbiyuutarada) sanduuqa hadiyad.
3150 ₽ Bouquet of-aadanka cad
Bouquet of white calla lili 11 pcs, buluug veronica 5 pcs, oo leh ruscus talyaani ah oo lagu qurxiyo oo leh xargo.
7050 ₽ Bouquet of calla ubax "Puerrto"
Bouquet of 101 tulips (26 Princess Irene tulips, 25 tulips cas, 25 tulips yellow, 25 tulips purple)
11150 ₽ Bouquet of 101 tulips
Ubax shub 3 kumbiyuutar, lisianthus 3 kumbiyuutarro, alstroemeria 3 kumbiyuutar, xarfaha shukulaatada 7 kumbiyuutar, cagaar, sanduuq.
4150 ₽ Sanduuq leh ubaxyo iyo waraaqo shukulaato ah "Hooyo"
Sanduuqa Koofiyadaha ee 'Aqua Roses' 45 kumbiyuutar.
6450 ₽ Sanduuqa koofiyadaha ubaxyada (45)
Bouquet of 51 tulips pink in warqad naqshadeeye la xarkaha.
6150 ₽ Bouquet of tulips jilicsan